China azu paaki T-B3351 rụpụta na Factory | TIGERNU
TIGERNU ejiji imewe nchekwa laptọọpụ nchekwa
Ihe: Ihe mgbochi laptọọpụ mgbochi mgbochi eji eji splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ Oxford dị ka isi ihe, inogide, ejiji, eco-friendly. A na-ahazi zipa na buckles na akara TIGERNU, nke na-adịte aka, dị elu, dị mma maka iji. Isi zipa bụ mmiri na-egbochi mmiri ma nwee ike igbochi ihe gị ịmị mmiri.
Ike: Nke a bụ nnukwu akpa azu paaki na nha nke 30 * 15.5 * 44cm (L * W * H) .Oghere oghere dị larịị zuru oke maka mkpa gị kwa ụbọchị, akwụkwọ, uwe, akụ ike, obere akpa, karama mmiri wdg. .Ọ nwere padded laptọọpụ oghere dabara ruo 15.6inch laptop.Back zoro mgbochi mgbochi na-ezu ohi n'akpa uwe bụ zuru okè n'ihi na gị dị oké ọnụ ahịa things.Pocket na iko hanga na eriri maka mfe nnweta, a niile atụmatụ na-eme ka njem gị ọzọ ala.
Nchedo: A na-emepụta akpa azụ a dị ka akpa akpa mgbochi, a na-akpọchi mkpọchi nwere ihe na-arụ mkpọchi eriri, ị gaghị echegbu onwe gị maka izu ohi ọzọ.Ọdụ USB USB nke dịpụrụ adịpụ nke ewuru na eriri USB nwere ike iwepu ya mere ka akpa a dị mfe iji kwụọ ụgwọ Ekwentị gị na ebe ọ bụla na-enweghị ike iji wepụ akụ gị.Usoro eriri ubu nwere ike idozi ma nwee mmetụta dị nro n'ubu ọbụlagodi mgbe eburu. Welldọ akpa a kpara nke ọma na-enye gị ohere itinye akpa gị na trolley nke akpa gị, na-eme njem gị na njem gị ka ọ dịkwuo mfe.
Ọ bụ ezigbo onye njem, ejiji ejiji maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ụmụ akwụkwọ. Họrọ TIGERNU, họrọ ndụ ka mma.TIGERNU akpaazụ, ikwesiri ịnwe otu.
Nọmba nlereanya T-B3351
Mbukota: 10 PC / ctn
Nha: L30 * W15.5 * H44cm
Nke gara aga: Paaki T-B3319
Osote: Paaki T-B3516
Akpa uwe Canvas Blank
Ugwu Ugwu n'ugwu
Egwuregwu Ezumike Egwuregwu
Njem na-agba ịnyịnya Jirinụ Jirinụ